Waa maxay Batidhaanka PCR iyo badhitaanka Antikroppstest? Waa badhitanaada cudurka covid-19
Waxa jira laba baadhitan oo kala duwan oo lagu ogaan karo cudurka covid-19. Badhitaanka PCR-test waxaad dalban kartaa markaad isku aragtidid astamaha cudurka covid-19. Badhitaanta antikroppstets waxa uu ku sheegaya inaad cudurka covid-19 kugu soo dhacay iyo in kale.
Baadhitaan samee hadii aad leedahay astamaha cudurka covid-19
Hadii aad iska dareentidid xanuun oo aad leedahay mid ka mid ah astamaha cudurka covid-19 waxaad balansataa badhitaanka PCR-test. Waa muhiim inaad baadhitanka cudurka covid-19 samaysid, si aad u ogaato inaad qabtid cudurka covid-19 si aanad ugu sii faafin dadka kale.
Talooyin guud oo maxalli ah oo ku aaddan in ay dadka oo dhan mas’uuliyad ka saarantahay in ay ka hortagaan faafitaanka covid-19 (PDF, 172 kB)
Sidii looga hortago faafinta cudurka [Covid-19] awgeed waxaad booqade ahaan sameeyn kartaa sidatan (PDF, 307 kB)
Kahortegida faafinta cudurka [Covid-19] ee xiriirka la leh booqashada guryaha gaar ahaan waayeellada loogu talagalay (PDF, 585 kB)
Regionala allmänna råd (krisinformation.se)